Nouvelles - Malaza Ny Gasy ( MNG )
10 Juil: Ampasy, Tuléar : Namboarina ny bisikiletan’ny mpanabe 14
Namboarina ny bisikiletan'ny mpanabe 14 mba hanamorana ny fandeanana mampianatra, tena miasa any ambanivohitra ny bisikileta.
10 Juil: Akany Longosoa : Famitana ny lakilasy fahatelo
Mitohy ny asa famitana ny lakilasy fahatelo ho an'ny Akany Longosoa, Ampasy Tuléar.
06 Juil: Akany Fo masin’i Jesoa : Fanatsarana ny lakilasy sy tranon’ny Mpanabe
Mitohy ny fanatsarana ny lakilasy sy tranon'ny mpanabean'ny Akany Fo Masin'ny Jesoa, Ampataka Ambositra.
05 Juin: Akany Onjasoa : Fanotofana ny lalam-pasika feno rano
Fanotofana ny lalana feno ranobe mankany @ ankany ho fitsinjovana ny ankizy beazina 604
13 Juin: Atsivora, Betioky atsimo : stage mpanabe 3 tao Ampasy, Toliara.
Niaraka t@ ireo coordinateurs nankany Ampasy, Toliara ireo mpanabe 3 vaovao nanao fiofanana isan-karazany..